Dove Tattoo - Dhamaan 35 Dumarka Dhamaan Doolka Design Design for Ragga iyo Haweenka
35 Xogta Foornada Doolaha Qodobka Dumarka iyo Ragga
Dhoofka shaashadda waxaa loo isticmaali karaa calaamad rajo, nolol cusub, nabadda iyo masiixiyadda. Dadka qaarkood waxay inta badan ku biiraan xoogaga sinnaanta ama xitaa dhaqanka. Weli waxaa jira dad u qaata sida calaamada jacaylka weligeed ah.
Dove shool oo macnaheedu yahay
Tawanka Dove wuxuu noqday calaamad muujinaysa jacayl, nabad iyo cibaado. Waa xuruuf xuruuf ah oo loogu talagalay masiixiga waxayna caan ku noqotay sanadihii la soo dhaafay. Tartanka xayeysiinta # wuxuu yimaadaa inuu nagula joogo sababtoo ah faqradiisa. Dad badan ayaa kufaraxaya quruxda la socota tattoo. Waxaa jira macnooyin badan oo la xiriira kicidda. Waxay mataleysaa bacriminta, dheddigga iyo weliba quruxda.
Yuhuuddu waxay aaminsan yihiin in ay u dhiganto iimaanka oo waxay u isticmaalaan inay faafiyaan fikradahooda iyo caqiidadooda. Fikradda Nasaarada ayaa sidoo kale si qoto dheer uga dhex muuqata. Kuwa isticmaalaya waxay aaminsan yihiin in ay yihiin kuwo naxariis badan oo la jecel yahay.
Doolarka #tattoo macnaheedu waa wax aad u muhiim ah dunida. Waxaa loo isticmaalaa sidii tattoo loo dulqaadan lahaa. Waxay u taagan tahay xasiloonida iyo joogtaynta. Tafooofka qoolleyda waxaa loogu talagalay inay noqoto mid qurux badan. Qoollada cadcad waxay ka dhigan tahay nadiif iyo daahir la'aan. Wax yar baa la yaabay gabdhaha yaryar ee gabdhaha yaryar iyaga oo ku dhex jira astaamahooda koowaad sida calaamad daahir iyo daryeel. Dadku waxay ku dari karaan sawirro kale oo ay weheliyaan qoollada oo ay ku jiraan isticmaalka farriimaha si ay u sheegaan macnaha kaladuwan ee tafaariiqda qashin qubka.
1. Fikradaha qashinka ah ee qashinka lagu raaxaysto ee qaboojiyaha hoose
Goontu waa maalmahaas markii xayiraadda tattoo loo aqoonsaday inay tahay wax nacas ah. Maanta, dharka qoobkacu wuxuu noqday mid ka mid ah siyaabaha dadku isu muujinayaan aduunka.
2. Fikradda naqshadda cirifka dhogorta ah ee loogu talagalay gabdhaha
Markaad raadineyso hab ka soo baxaya ifafaale ama qaab nololeed cusub, qoob-ka-soo-baxa waa mid ka mid ah sidii loo sameyn lahaa. Waxaa jira waxyaabo ay tahay in aad fahamto haddii aad ka fekereyso helitaanka qashin qub ah oo wakhti dheer soconaya.
3. Fikradda caloosha ku dheji fikradda macaamiisha
Qaybta saldhiga waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah taasi waa halka aad ku socoto si aad u heshid. Haddii xarun aan raaxo lahayn oo gaar loo leeyahay, waxaa laga yaabaa inaanay noqon meel fiican oo lagu nasto.
4. Fikradda cirifka lafdhabarta ah
Nasashada iyo raaxada ee ku timaadda xanuunka marka la geliyo khadadka waa waxa ka dhigaya faraqa farshaxanka.
5. Fikradaha qashinka garabka ee garbaha xaraashka ah ee loogu talagalay gabdhaha
Ma noqon kartid waqtiga ugu horeeya marka ay timaado qashinka tinwadaha laakiin waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad naftaada u caawiso.
6. Fikradaha quruxda badan ee qashinka ah ee dhabarka
Qoobka dhar-shiidka ayaa noqon kara qurux laakiin waa inaad hubisaa in ay tahay waxa aad rabto ka hor intaan la gelin. Tartanka xayawaanka ee joogtada ah wuxuu noqdaa waxa dadka intooda badani u socdaan. Haddii ay tahay inaad tagto qashin qubka joogtada ah, waxaa muhiim ah inaad la kulantid khabiir kaas oo soo jiidaya qashinka xayawaankaaga.
7. Fikradda quruxda badan ee shimbirta loogu talagalay gabdhaha
Haddii aad ka heli kartid hal-abuurkaaga khabiirkiina, waxay u sahlanaan doontaa in qashinkaaga qashinkaaga u soo baxo sida quruxda badan ee aad rabto.
8. Fikradda naqshadda ee qotka qotodheer
Tawanka qoobkacu wuxuu leeyahay rafcaan shakhsi ah taas oo ah sababta dad badani ay u isticmaalayaan. Doolada shaashadu waxay leedahay hab lagu muujiyo marka la arko.
9. Fikradda qashinka shimbirta qabow oo qurux badan loogu talagalay ragga
Dad badan oo qaata xayawaanka qafiska ayaa leh hal sabab ama tan kale. Ma fahmi kartid farxadda ilaa intaad mid leedahay. Farshaxanka iyo qofka jirkiisa helay khadka ayaa leh wax qabad.
10. fikradda xiga ee xawaaraha tattoo lagu qoro gabdhaha
Tawanka qoobkacu wuxuu keenaa saaxiibtinimada qaabka farshaxanka. Sababta keentay qoob-ka-soo-qaadashada ayaa noqotay mid cajiib ah sanado badan sababtoo ah dad aad u tiro badan ayaa codkooda ka helay sawir-taadka qashinka.
11. Fikradda dharbaaxada garbaha ah ee la yaabka leh ee wiilasha
Muhiim maaha meesha aad ka timid ama waxa aad aamminsan tahay, marka ay timaado qashinka tattoo, wax waliba isbedelaan. Tawanka qoobkacu wuxuu keenaa codad midkale oo buundooyin badan oo kala googo'an nolosheena.
12. Fikradda quruxda qurxinta quruxda badan leh ee gacanta
13. Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee quruxda badan ee gabdhaha
14. Fikrada qoob-ka-ciyaarka ah ee loogu talagalay dumarka
Waxaad isticmaali kartaa qashin qubka si aad u muujiso daahfurnaanta iyo madaxbannaanida. Xitaa waxaad arki kartaa sida sharaf iyo awood ciidan.
15. Fikradda shaqo ee qoob-ka-darka ah ee sawir-gacmeedka
Waxaan ka dhigi karnaa nabad iyo qoollo. Si loo xoojiyo heshiisyadeena nabadda ama xasuusno balanqaadkeena aan u sameyneyno mid kale, waxaan u tegi karnaa xabbad tageero. Tani waa sababaha badan ee dumarka iyo ragga jecel nabada ku sawira jidhkooda.
16. Fikradda jilicsan ee jilicsan ee loogu talagalay gabdhaha
Xitaa lamaanayaasha lama tagayo marka ay timaado qoyaanka digaagga. Waxaad ka heli kartaa qoolley qashin qub ah oo jidhkaaga ah. Ma aha oo kaliya dumarka ka dhigi kara isticmaalka qaabkan. Xataa xaasaska labka ah waxay ku dhici doonaan jacayl.
17. Garbahaaga si aad u aragto qashinka shimbiraha ah ee loogu talagalay gabdhaha
Gacanku wuxuu noqon karaa meel fiican oo aad ka heli kartid sawirada qoortaada. Dharka dhererku wuxuu noqon karaa hal sawir oo ah tattoo-gaaga. Markaad raadineyso wax khayaali ah sida gabadha ama xitaa nin, kaddibna gacantaadu waxay u adeegi kartaa booska si aad u sameyso hadal aanad awoodin inaad sameysid jidh ahaan.
18. Fikradaha qashinka dib loo cadeeyo ee macaamiisha
Dhabarku wuxuu u adeegi karaa barxad si uu u muujiyo quruxda xayawaanka qafiska. Rootiga ayaa xitaa la geli karaa qaababka iyo naqshadaha kale. Xitaa ereyada waxaa lagu qori karaa tattoo si aad u aragto mid gaar ah. Dad badan ayaa loo arkaa inay ku daraan magacyadooda.
19. Fikradaha qashinka lagu duubo ee gacmaha lagu dhejiyo wiilasha
Gacanta waxaa lagu qurxin karaa tattoo-ga qoolley. Gacanku waa qayb muuqata oo jirka ka mid ah oo aad si fudud u muujin karto tattoo-gaaga. Tani # majaladda waxay ku habboon tahay ragga.
20. Fikradda naqshadeynta digaagta
Dumarku ma joojin karaan jecel tattoo tashadaan. Naqshadeynta dermaha ayaa waxay noqotey mid caan ah oo ka mid ah dumarka qaarkood. Naqshadu waa haweeney waxaana si buuxda u qiimeyn kartaa qof kasta oo arka arinta.
21. fikradda qoob-ka-ciyaarka ee dib-u-celinta fikradda gabdhaha
Tilmaamyada dambe ee qafiska ayaa si sahlan u samaysan kara calaamad ahaan marka si buuxda loo qorsheeyo halka qof kastaa uu arki karo sidaan oo kale.
22. Fikradaha dhogorta oo buuxa muraayadda loogu talagalay gabdhaha
Sawir gacmeed buuxa ayaa laga soo qaadi karaa garabka. Waxay noqon kartaa tattoo jirka oo furan ama xiran iyadoo ku xiran dharka aad xiran tahay.
23. Fikradda naqshadaynta qafiska qotodheer ee loogu talagalay dhabarka hoose
24. Roodhiga roogga ee roodhida sawirka tattoo ee gabdhaha
25. Fikrado naqshad cad oo dhar cad loogu talagalay garabka ragga
26. Tilmaamo qashinka ah oo leh dhar qaboojiye gaduud ah
27. Tilmaamo dhaadheer leh oo qurux badan
28. Dub madow qoolley yar-yar oo dharka lagu rakibo dhabarka
29. Fikrado qashin ah oo qashinka lagu qurxiyo fikradda raajada ragga
30. Fikrado qashinka lagu dhejiyo ragga ragga
31. Gacanta quruxda iyo qoolleyda shimbirta shimbiraha ee haweenka dib u soo noqda
32. Foornada caadiga ah ee shimbirta tattoo ink farshaxan ragga
33. Naqshadaynta qoolleyda oo qaylo-dhaan ah oo gabadha dib u soo celisa
34. Cirifka xayawaanka loo yaqaan 'tiger' ayaa loo yaqaan 'garabka'
35. Fikirka naqshadeynta iyo qafiska ee farsamada naqshadda ragga
Halkan riix si aad u hesho Dove Tattoos Designs
tattoos qoortatattoos qabaa'ilkaqadhaadhlammaanahaarrow Tattoosawir gacmeedlaabto laabtatattoo biyo ahtattoo indhahatattoos cagtatattoos eaglesawirrada ragganaqshadeynta mehndilibto libaaxtattoos ubaxtattoo tilmaantattoo dheemandabbaaldegga dabbaaldeggasawirada malaa'igtagadaal u laabotattoos sleeveshimbir shimbirtattoos gacantatattoos qosol lehDhaqdhaqaaqatattoos-da riyadiisatattoo maroodigatattoos moonku dhaji tattoosdharbaaxohenna tattootattoo yar yartattoo dragongaraacista gacmahatattoos iskutallaabtashaatiinka shiidanTattoo Feathertattoos taajkiifikradaha tattootattoos saaxiib saxa ahTattoos WadnahaTattoo infinitytattoos qorraxdaTilmaamta jaalaha ahTartoo ubax badantattoossawirada gabdhahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahjimicsiga bisadahawaxaa la dhajiyay tattoos